Desktop.ini virus ကိုက်နေလို့ ကယ်ကြပါအုံး — MYSTERY ZILLION
Desktop.ini virus ကိုက်နေလို့ ကယ်ကြပါအုံး
အကိုတို့ ၊ အမတို့ရေ
ကျွန်တော်. Computer မှာ desktop ini ဆိုတဲ့ virus ကိုက်နေလို့ဗျ ။ ဘာနဲသတ်ရမှာလဲ ။ ကူညီပေးကြပါအုံး ။
အဲဒါ ဗိုင်းရပ်စ် ဟုတ်လို ့လားအကိုရ သေချာပြန်ကြည့်ပါဦး...
Avira Antivirus နဲ ့စစ်ကြည့်ပါလား...
wateinyan wrote: »
ကိုသီဟ စက်ကဘာအန်တီဗိုင်းရပ်တင်ထားတာလဲ ကျွန်တော်မေးဖို ့မေ့နေတယ် nod32 တင်မလား
nod32 နဲ့မသေဘူးဖြစ်နေတယ် ဆရာ ။ file တွေက hidden ဖြစ်နေတယ် ။ ပြီးတော့ file တိုင်းမှာ
Desktop.ini ဆိုပြီးပေါ်နေတာဆရာ ။ ကူညီပေးပါဆရာရယ် ။ :77::77::77:
အဲဒါ ဗိုင်းရပ်မဟုတ်လောက်ပါဘူးဗျာ။ system file ကို show လုပ်ထားလို့ ပေါ်နေတာပါ windows က generate လုပ်တဲ့ဟာပဲ ပြဿနာမရှိပါဘူး။
အကိုတို့ ၊ အမတို့ရေ ကျွန်တော်. Computer မှာ desktop ini ဆိုတဲ့ virus ကိုက်နေလို့ဗျ ။ ဘာနဲသတ်ရမှာလဲ ။ ကူညီပေးကြပါအုံး ။
Norton ခေတ်က Virus နဲ့တူတယ်ဗျ။ စက်ကXP လားမသိဘူး။ desktop.ini virus ဆိုရင် သူနဲ့တွဲပြီး folder.htt ဆိုတာရှိနေမယ်ဗျ။ ဘာမှတော့မလုပ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျ။ စက်ထဲကရှိသမျှ Folder တွေထဲမှာ အဲဒီ ၂ ဖိုင် လိုက်ဆောက်တာ။ ကျွန်တော့်တုန်းကတော့ manual လိုက်ဖျက်လိုက်တယ်။ Search ကနေရှာပြီးတော့ဗျာ။ desktop.ini က system ဖိုင် name ဆိုတော့ anti virus တွေက virus လို့ မသတ်မှတ်ဖြစ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ အခုနောက်ပိုင်း မတွေ့တာတောင်တော်တော်ကြာပြီဗျ။ တခြားသိတဲ့သူတွေ ပြောပြကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်သိသမျှကတော့ အဲဒါပဲဗျ။